Akhriso Dowlada Kenya Oo Qiratay In Askar Looga Laayay Lamu. – Bogga Calamada.com
Akhriso Dowlada Kenya Oo Qiratay In Askar Looga Laayay Lamu.
November 30, 2017 5:10 pm Views: 212
Saraakiil u hadashay dowlada saliibiyada ah ee Kenya ayaa xaqiijiyey in laba askari lagu dilay, saddex kalena lagu dhaawacay weerar kamiin ah oo dhawaan ciidamada Mujaahidiinta ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya xilli ay marayeen wadada halbowlaha ah ee isku xirta magaalooyinka Lamu iyo Malindi.
Sarkaalkan ayaa sheegay in laba askari lagu dilay weerarkaas, laguna dhaawacay saddex kale. Wuxuu intaas ku daray in weerar kale oo dhabagal ah lala eegtay ciidamo ka tirsan guutada GSU oo gurmad ahaan u soo aaday halka uu weerarku ka dhacay.
Wuxuu sheegay in askar dhowr ah laga dhaawacay, kuna baxsadeen si dirqi ah ka dib markii ay ku dhaceen weerar gaadma ah.
“Dagaalyahanadu waxay wateen darees military, waxay dadku u qeybiyeen warqado yaryar, wax dhibaato ahna uma geysan” ayuu yiri wargeyska.
“Gaari Police-ka ee na galbinayey masaafo ayuu naga dambeeyey, Baskeena ayey markii hore joojiyeen. Waxaan arkay laba iyaga ka mid ah, aad bey u hubeysnaayeen, iskuna qarinayeen. Gaariga ayey soo galeen, ka dibna weyna baareen ka hor inta aysan warqadaha noo qeybin” sidaas waxaa yiri mid ka mid ah goobjoogeyaasha u waramay wargeyska.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri: “Ka dib wey ka soo dageen gaarigeena, ka dibna waxay aadeen dhanka gaadiidkii naga dambeeyey, markaas ayeyna ahayd markii aan maqalnay rasaas xoogan oo marqura bilaabatay” ayuu yiri.
Joseph Kanyiri oo ah agaasimaha ololaha ka socda keymaha Boni ayaa sheegay in Mujaahidiinta Al-Shabaab ay hadda isticmaalayaan wax uu ku sheegay dacayaat cusub taas oo uu sheegay in ay ku buun-buuninayaan howlgalka ay ka wadaan gobolka, kuna kasbanayaan quluubta dhalinyarada iyagoo ka dalbanaya in aysan la shaqeynin ciidamada Amaanka iyo hay’adaha dowlada.
Dowladda Saliibiyada ah ee Kenya oo dadaal nooc kasta ah ku bixisay ka hortagga isfidinta mujaahidiinta ee gudaha Kenya ayaa hadda la nool marxalad cusub oo uu galay dagaalka ka dib markii mujaahidiintu ay ka soo gudbeen darbiyada lagu dhiriray xuduudaha, iyo duqeymihii cashwaa’iga ee keymaha, dhimiblaha dagaalkuna gaarsiiyeen Al-baabada Malindi iyo Tana River.